News - အနိမ့်အထပ်မြင့်သော OR အခန်းတွင်မျက်နှာကျက်နေသောအလင်းရောင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသလား။
OR အခန်းနိမ့်အမြင့်ရှိ OR အခန်းတစ်ခုတွင်မျက်နှာကျက်နေသောအလင်းရောင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသလား။
နှစ်ပေါင်းများစွာရောင်းအားနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံတွင်ဝယ်ယူသူအချို့သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် operating အလင်း.
တစ် မျက်နှာကျက် operating အလင်း၎င်း၏တပ်ဆင်ထားသောအမြင့်သည် ၂.၉ မီတာရှိသည်။ သို့သော်ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ အီကွေဒေါသို့မဟုတ်အချို့သောအာဖရိကနိုင်ငံများရှိသူတို့၏ပြဇာတ်ရုံများသည်အမြင့် ၂.၉ မီတာအောက်တွင်ရှိသည်။ သူတို့မျက်နှာကြက်ကိုတပ်ဆင်လို့မရဘူးoperating အလင်း?
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်မည့်အမြင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုလူသိများအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။ တပ်ဆင်ထားသောအမြင့်ဟုခေါ်သည့်ကြမ်းပြင်၏အမြင့်သည်အလှဆင်မျက်နှာကျက်မှမြေပြင်အထိအမြင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီအလှဆင်မျက်နှာကျက်ရှိသည်မဟုတ်သောအချို့သော operating အခန်းများနေဆဲရှိပါတယ်။ ဤအခန်းအမျိုးအစားအတွက်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုအမြင့်သည်ခေါင်မိုးမှမြေပြင်နှင့်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။
နောက်ကျောခေါင်းစဉ်ကိုပြန်နှစ်ပေါင်း 20 နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် operating အလင်းပေးသွင်းအဖြစ်ငါတို့၌အဘယ်သို့ဖြေရှင်းနည်းများရှိသနည်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အသစ်အီကွေဒေါအကြားအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
၀ ယ်ယူသူသည်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းတစ်ခုအတွက်ခေါင်းနှစ်လုံးပါသော LED မီးလင်းလက်ကိုဝယ်ယူနေသည်။ အမှာစာမချမီ၊ တပ်ဆင်မည့်အမြင့်ကိုပေးရန်သူ့ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ အောက်ကပုံကသူပြန်ပို့လိုက်တဲ့အမြင့်တိုင်းတာမှုဖြစ်စဉ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကြမ်းပြင်အမြင့်မှာ ၂.၆ မီတာသာရှိသည်၊ ၎င်းသည်စံအမြင့်လိုအပ်ချက် ၂.၉ မီတာနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုသည်
နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏ခွဲစိတ်ခန်းအသစ်သို့သွားစဉ်သူ၏ဆရာဝန်သူငယ်ချင်းကခေါင်းနှစ်လုံးပါသော LED ကိုပြန်လည်စီစဉ်ပေးခဲ့သည် operating အလင်း။
ဤဆက်သွယ်ရေးကိစ္စမှတစ်ဆင့်ကြမ်းပြင်အမြင့် ၂.၆ မီတာရှိသောအခန်းသည်မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ရန်အခြေအနေများရှိနေသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြသည် operating အလင်း။
သို့သော်အမှုအရာအချို့ရှိပါသည်။ ဥပမာ - အခန်း၏အမြင့်မှာ ၂.၄ မီတာခန့်သာဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဖောက်သည်များကနံရံပုံစံကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ operating အလင်း သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း operating အလင်း။
halogen OT light မှ LED OT light အထိကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးအတွေ့အကြုံရှိပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌ခွဲစိတ်မီးများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက operating အလင်း, သင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်, ငါတို့ကဖြေရှင်းနိုင်သည်ဝမ်းမြောက်သည်။